7th -9th Aprial, 2021, isu tinopinda 104th China chikafu neKunwa Fair kuChengdu guta. Met akawanda makambani akabatira pamwe uye ane akanaka anoshanda panguva ye fair.this yakanaka ndeye 3day, Vedu vatinoshanda navo vakasvika pakuratidzira pane ...
19 Kukadzi, 2021, kambani iyi yakaita musangano wekuvhura mushure mezororo reCNY. Vashandi vese vakaita pic kufekitori, vozoenda kuresitorendi kunopemberera. Panguva imwecheteyo, kupihwa vashandi vakatanhamara mukati megore ra2020. Nhanho inonyanya kukosha ndeyekuti mukuru webasa ave nepfumo ...
Muchirimo cha2020, kambani yakaronga kubuda kwechirimo kwevashandi. Chinangwa chekubuda kwechirimo uku kuwedzera mufaro wevashandi uye kuwedzera kushingairira kwevashandi. Chinangwa chekambani yedu Kubatana, kutsvaga chokwadi, hunyanzvi. Iko kuenda kwe th ...